War Deg Deg : Qarax Labaad oo ka dhacay Aaga Hotel Dayah dhawacyo iyo Meydad badan oo laamiga …!! | kowtharmedia.com
Home WARAR War Deg Deg : Qarax Labaad oo ka dhacay Aaga Hotel Dayah dhawacyo iyo Meydad badan oo laamiga …!!
War Deg Deg : Qarax Labaad oo ka dhacay Aaga Hotel Dayah dhawacyo iyo Meydad badan oo laamiga …!!
Jan 25, 2017WARAR
Qarax loo adeegsaday Gaari ayaa ka dhacay Hotelka Dayax oo ku yaala Wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho, Qaraxa ka dib ayaa maleeshiyaad Shabaab ah waxay gudaha u galeen hotelka waxaana bilowday dagaal u dhaxeeya Maleeshiyada iyo ciidanka dowladda.
Wali rasaas ayaa ka dhacaysa gudaha hotelka sida ay soo sheegayaan wariyaasheena jooga meel u dhow halka uu weerarku ka socdo iyo dad kale oo ka mid ah deegaanka.
Sidoo kale waxaa goor dhow Qarxay gaari laga shakisnaa oo yaalay meel u dhow hotelka, iyadoo ciidamadu ay si weyn uga foojignaayeen, sida SONNA ay u sheegeen saraakiil ka tirsan Hay’adaha ammaanka.
Wali lama oga khasaaraha Rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaan Maleeshiyada Argagixisada ah ay ku soo qaadeen Hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho.
Faah faahino dheeraad ah goor dhow la soco.
Qaraxa kale ee hada ka dhacay Aaga Hotelka Dayah ee Muqdisho , waxaana wararka aan heleyno sheegayaan in qaraxa labaad uu yahay gaari Nuuciisa NOAH yahay oo la dhigay meel ku dhaw Hotelka.
Xaalada ayaa ah mid wali kacsan, waxaana goobta gaaray gaadiidka amplaasta kuwa oo goobta ka qaadaya meydadka dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay, aaga dhan ayaa ah kuawa wada dhiig ah oo muuqaal argagax leh laga dareemayo.
Previous PostMUUQAAL: Sheekh Shariif oo Waraysi Xiiso badan Bixiyey “4-tii sano dib ayaa loo noqday, Aniga ayaa la idooranayaa” Daawo! Next PostKu dhowaad boqol Dhalinyaro Soomaali ah oo dhawaan laga soo tarxiilaayo dalka Maraykanka!!